Kurongwa uye Kushanda Magadzirirwo eGesi Pressure Regulator
Mabasa Anogona kuve akapatsanurwa kuita maviri marudzi: epakati mhando uye yepositi mhando maererano nezvakasiyana zvimiro, inogona kugoverwa mumhando mbiri: imwechete-nhanho uye mbiri-nhanho; Kushanda Musimboti Musiyano c ...
Zvikonzero zveruzha rweGesi Pressure Regulator
1. Ruzha rwunogadzirwa neanogadzira vibration: Izvo zvikamu zvegasi kumanikidza kudzikisa vharuvhu ichagadzira michina vibration kana kuyerera kwerukova. Mechanical vibration inogona kukamurwa kuita maviri mafomu: 1) Yakadzika frequency vibration. Rudzi rwe vibra ...
Zvikonzero uye Mhinduro dzeMukati Kuvuza kweKudzvinyirira Regulator
Iyo yekumanikidza inodzora chimbo chinodzora icho chinodzora yakakwira-kumanikidza gasi kune yakaderera-kumanikidza gasi uye inochengeta iyo kumanikidza uye kuyerera kweinobuda gasi yakatsiga. Icho chigadzirwa chinodyiwa uye chinodiwa uye chakajairika chinhu mune gasi pombi sisitimu. Nekuda kwehunhu hwechigadzirwa p ...